Dombo Cold Steve Austin nezvekuti muKristu akabatsira sei kugadzira 'Chii' chinyorwa - Wwe
Dombo Cold Steve Austin pamusoro pekuti AEW nyeredzi yakabatsira sei kugadzira iyo 'Chii' catchphrase
WWE Horo yeNzara Dombo Cold Cold Steve Austin aburitsa maitiro aakagadzira iyo 'Ndeipi' catchphrase. Austin akataura kuti AEW nyeredzi Christian Cage akaita chikamu chidiki mukugadzira iyo yekubata.
Stone Cold Steve Austin 'muenzi panezvazvino Yakaputswa Dehenya Sessions aive Randy Orton, uye vaviri vacho vakakurukura nezve zvakawanda zvinhu.
Ndichiri kutaura nezveaimbove WWE Superstar Christian - uyo aive nehukasha naOrton muWWE, Austin akaburitsa pachena kuti akauya sei neiyo 'Chii' catchphrase uye kuti Captain Charisma akamubatsira sei.
Vanhu vanogara vachindibvunza kuti ndakauya sei neiyo 'Chii' chinhu. Ndakafonera Christian nharembozha yake, hongu haana kudaira nekuti ndini ndaifona. Saka ndakamusiira uyu mweya-wakareba meseji uko kwandinotaura chimwe chinhu benzi uye ini ndoenda, 'Chii'. Ini ndinoramba ndichienda, 'Chii', uye ndichienderera mberi. Panguva yandakadimbura runhare - ndakasiya senge yemaminetsi maviri meseji - uye ini ndaive ndichishanda chitsitsinho panguva iyoyo, ndaive senge, 'ndinofunga ndine chimwe chinhu pano.' Ndiwo marongero akaitwa izvo 'Izvo'. '
Dombo Cold Steve Austin akataura kuti aisangova muKristu mumwe wevadzivisi vaityisa vaRandy Orton, asi akabatsirawo Austin kuumba runyorwa rwake rwakakurumbira. Muhurukuro imwecheteyo, Orton akarumbidza iyezvino AEW nyeredzi, achimudana kuti 'mumwe wepfungwa dzakanakisisa'.
Dombo Cold Cold Steve Austin's anozivikanwa catchphrases
Sezvo iri 3:16, gara pasi uye unakirwe neyakanakisisa eDombo Cold Steve Austin
(kuburikidza @WWE ) pic.twitter.com/C5LTCuSthR
- ESPN UK (@ESPNUK) Kurume 16, 2021
Dombo Cold Steve Austin aive anoshamisa mukurumbira panguva yeAtitude Era, achive kumeso kweWWE uye kuunganidza mafeni kubva kumativi ese epasi.
Nhoroondo yeWWE yaive nemashoprases mashoma anozivikanwa anoita kuti kuseka kubva kune mafeni kusvika nhasi. Kunze kweiyo 'What' catchphrase, mamwe mazwi anonyanya kuzivikanwa aAustin anosanganisira 'Ndipe gehena hongu', 'Austin 3:16 inoti' uye 'Uye ndizvo zvinokonzeresa kuti Dombo Cold radaro', kutumidza mashoma.
Ah Helo Hongu !!!
Kutenda munhu wese.
3-16 iri pamutemo Dombo Cold Zuva. Uye ndiwo mutsara wepasi, nekuti ndataura kudaro. # austin3 : 16 https://t.co/uUyvo7tnLg
- Steve Austin (@steveaustinBSR) Kurume 19, 2021
Ndokumbirawo H / T Broken Skull Sessions uye Sportskeeda kana iwe ukashandisa chero eiri pamusoro mazwi.
sei ndine nyaya dzekuzvipira
kuziva sei kana ndichifarira mumwe munhu
zvinhu zvekuitira vanhu vasina shamwari
maitiro ekuvaka zvakare kuvimba mumuchato mushure mekunyepa
murume wangu haadi kuva neni
hukama hwehukama hwakanaka kupa shamwari